Nuciferine powder (475-83-2) hplc =98% | AASraw Fat Kurasikirwa powder
/ Products / Plant Plant Extract / Nuciferine upfu
Rating: SKU: 475-83-2. Category: Plant Plant Extract
ICHINYANYA ndechekugadzirisa uye kugadzira zvigadzirwa kubva ku gram kusvika mukurongeka kweNuciferine powder (475-83-2), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Nuciferine powder is alkaloid inowanikwa mumiti Nymphaea caerulea uye Nelumbo nucifera. Iine chimiro chekuita chinosangana ne dopamine receptor blockade. Inotisa sedation, hypothermia, ptosis, uye (mupamusoro doses) catalepsy; iyo inhibits zviitiko zvinokonzerwa nemotokari, kushandiswa kwemaitiro ekudzivirira, amphetamine kutyisa uye kusagadzikana. Nuciferine powder inogonawo kukwanisa morphine analgesia. Mushonga unouraya wepakati mutsva mumakonzo ndeye 289 mg / kg. Iyo yakarongeka yakabatana ne apomorphine.
Raw Nuciferine powder Basic Characters
Name: Nuciferine powder
Molecular Kurema: 295.38
Raw Nuciferine powder mukurema kurasikirwa
Raw Nuciferine powder Usage
Nuciferine powder is alkaloid inowanikwa mumiti Nymphaea caerulea uye Nelumbo nucifera. Iine chimiro chekuita chinosangana ne dopamine receptor blockade. Inotisa sedation, hypothermia, ptosis, uye (mupamusoro doses) catalepsy; iyo inhibits zviitiko zvinokonzerwa nemotokari, kushandiswa kwekuchengetedzwa kwemaitiro, amphetamine kutyisa uye kusagadzikana. Nuciferine powder inogonawo kukwanisa morphine analgesia. Mushonga unouraya wepakati mutsva mumakonzo ndeye 289 mg / kg. Iyo yakarongeka yakabatana ne apomorphine.
1.Nuciferine poda yakakosha inonyanya kushandiswa aporphine alkaloid kubva kumashizha eN. nucifera Gaertn ane vane anti-hyperlipidemia, anti-hypotensive, anti-arrhythmic, uye mabasa e-insagogin secretagogue.
2. Nuciferine powder inokosha musarudzo yemishonga yekurapa zvirwere zvine hutano hwakanyanya, kuburikidza nekuvandudza HFD-induced dyslipidemia pamwe nechiropa cheatosis nekukuvara.
3. Nuciferine poda yakasviba inogona kuva yakakosha yekudzivirira uye kurapwa kwehutachiona hwehutachiona nekuputika kwepvo.
4. Nuciferine powder ine simba rakasvibiswa nemaitiro maviri ekupedzisira endothelium uye-asingakoshi, zvinoratidza kuti Nuciferine powder inogona kuve nemigumisiro yekurapa zvirwere zvevascular zvinosanganiswa nevakawanda vasoconstriction.
5. Nuciferine poda yakasvibiswa, yakabviswa kubva kuNelumbo nucifera, inogona kuita kuti zvikamu zvose zve insulin zvivhare muzvitsuwa zvisiri kure nekuvhara potassium-adenosine triphosphate channels, kutsanangura zvinopesana nehutachiona hwehutachiona hweNelumbo nucifera.
6. Nuciferine powder (CAS 475-83-2) inhibits tumor-inosimudzira mhedzisiro yeicotine inosanganisira Wnt / β-catenin signaling mune isiri-diki kenza yemapapu yemukenza, inopa imwe nzira inoverengeka inoenderana neNSCLC kudzivirira uye kurapwa.
Warning on Raw Nuciferine powder
Kugovera kuchengetedza kunotaurwa pane chigadzirwa cheal uye chivharo chinochengetwa zvakasimba chisimbiso, chigadzirwa chinogona kuchengetwa kusvika kumwedzi ye24 (2-8C).
Pose pazvinogoneka, unofanira kugadzirira nekushandisa sarudzo musi iwoyo. Zvisinei, kana iwe uchida kugadzira zvigadziriswa zvisati zvaitika, tinokurudzira kuti uchengetedze sarudzo seanquots mumatare akasimbiswa zvakasimba pa -20C. Kazhinji, idzi dzichashandiswa kwemasvondo maviri. Usati washandisa, uye usati watanga vhudzi isu tinokurudzira kuti iwe uregere kuti chigadzirwa chako chienzanise nekamuri yekupisa kwemaawa anopfuura 1 awa.
Kuiswa kwechigadzirwa chacho kungave kwakashandura pasi panguva yekufambisa, zvichiguma mumakemikari ezvisikwa anonamatira pamutsipa. tora chigodo kubva mumapurasitiki uye unyoroke kuti uite kuti michina iwire pasi payo. nokuda kwezvinhu zvinoshandiswa mumhepo, centrifuge pa 200-500 RPM kuunganidza mvura iri pasi pechidimbu. edza kudzivisa kurasikirwa kana kusvibiswa panguva yekubata.
In Vitro uye In Vivo Maitiro eAlkaloid Nuciferine powder
Nhamba yakawanda (Nelumbo nucifera) ine phytochemicals yakawanda uye ine nhoroondo yekushandiswa kwevanhu. Kuti tione kuti zvikamu zvipi zvingave zvakakonzerwa nehutano hwehutano hwepfungwa, takashandisa mu-silico kufanotaura kwezvinonzi phytochemicals. Nuciferine poda yakasviba, nhengo ye alkaloid yeNelumbo nucifera uye Nymphaea caerulea, yakanga yafanotaurirwa maitiro ezvinyorwa zvakafanana nemishonga inopesana nenyonga. Kudzidza kwedu kunofananidzira Nuciferine powder inoshandisa in vitro uye in vivo mishonga yemasvomhu.
Nuciferine iyo yakasvibirira yakatanga kuve yakasarudzwa mu-silico kushandiswa kwekufananidzwa pamwe chete, uye yakateverwa nekuwedzera kuratidza nekugadzirisa uchishandisa Psychoactive Drug Screening Program yeNational Institute of Mental Health. Nuciferine powder yakazoongororwa mu vivo mumusana-mutsva, kupindira kwepisimusi, basa rehupiritori, uye kushandiswa kwezvinodhaka maharadigms.
Nuciferine powder inosangana nemufananidzo wezvinyorwa zvakafanana neyepiprazole-like antipsychotic drugs. Nuciferine poda yakasvibiswa yaiva mhandara pa 5-HT2A, 5-HT2C, uye 5-HT2B, anverse agonist pa 5-HT7, agonist akasiyana paD2, D5 uye 5-HT6, anogonist pa 5-HT1A uye D4 mutevedzeri, uye inhibited dopamine transporter. Mu rodent models inobatsira antipsychotic drug action, Nuciferine powder yakavharwa musoro-twitch mhinduro uye kusarura zvinokonzera kushungurudzwa kweA5-HT2A agonist, yakashandurwa nokuda kwekuvharidzira kusarudzira kusarura, kuwedzerwa amphetamine kunokonzera kushandiswa kwezvinhu, kuvharwa phencyclidine (PCP) -kuita basa rekuita, uye kununurwa kwePPP-inokonzerwa kuvhiringidzika kwekugadzirisa kusagadzikana kusina kuiswa kwecatalepsy.
Iko molecular profile yeNuciferine yakasviba yakasakara yakanga yakafanana asi haina kufanana neyo yakagoverwa nemiti yakawanda inobvumirwa antipsychotic zvinoratidza kuti Nuciferine powder ine maitiro anypical antipsychotic-akaita.
Nuciferine Raw Powder (CAS 475-83-2)
Raw Nuciferine powder Marketing
Nzira yekutenga Nuciferine powder (CAS 475-83-2) kubva kuAASraw vatengesi